Gcwalisa uLuhlu loTshintshiselwano OST Iimpazamo zeFayile kunye neengxaki
Ikhaya iimveliso DataNumen Exchange Recovery Gcwalisa uluhlu lweempazamo
Shintsha OST Iimpazamo zeFayile kunye neengxaki
Gcwalisa uluhlu lweempazamo kunye neengxaki ngokuTshintshiselana OST iifayile
Xa usebenzisa iMicrosoft Outlook ukuvula ifayile ye- yonakele or inkedama ifolda engasebenziyoOST), okanye uyihambise kunye neseva yoTshintshiselwano, uya kudibana nemiyalezo eyahlukeneyo yempazamo, enokuba iyakudida. Ke ngoko, apha siza kuzama ukudwelisa zonke iimpazamo ezinokubakho, zilungiswe ngokwamaxesha aqhubekayo. Kwimpazamo nganye, siza kuchaza uphawu lwayo, sichaze isizathu sayo kwaye sinike isisombululo, ukuze ube nokuziqonda ngcono. Apha ngezantsi siza kusebenzisa 'igama lefayile.ostukubonisa uguquko lwakho oluphosakeleyo OST igama lefayile.
"Ayikwazi ukuvula ii-imeyile zakho ezingagqibekanga. Ifayile ye-xxxx.ost ayisiyo fayile eneenkcukacha ngaphandle kweintanethi."
"Ayikwazi ukwandisa ifolda. Iseti yeefolda ayinakuvulwa. Iimpazamo zinokufunyanwa kwifayile ye-xxxx.ost. Yeka zonke izicelo ezenziwa ngeposi, emva koko usebenzise i-Inbox Repair Tool."
Ayikwazi ukuvula izinto ezithile ze-Outlook xa zingaxhunyiwe kwi-intanethi.
Iimpazamo ezohlukeneyo xa ungqamanisa ibhokisi yemeyile yokutshintsha utshintshiselwano neyakho OST ifayile.
Ngaphaya koko, xa usebenzisa ifolda engaxhunyiwe kwi-intanethi (OST) ngeMicrosoft Exchange server, usenokuhlangabezana nazo ezi ngxaki zilandelayo rhoqo, ezinokusonjululwa ngu DataNumen Exchange Recovery lula.
Ii-imeyile kunye nezinye izinto kwibhokisi yemeyile yokutshintshiselana ziyacinywa ngempazamo.
Guqula utshintsho OST ifayile kwifayile ye-Outlook PST.
Utshintshiselwano okwangoku lukwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ngaphezulu OST ingxaki yefayile (OST ubungakanani befayile bufikelela okanye budlula umda we-2GB).